Ungalwenza njani uPhendlo lweLizwi kwiYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani into yokukhangela ngelizwi kwiYouTube?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 427
Iqonga leYouTube alidinwa ngokwenza izinto ezintsha kunye nokunikezela izinto ezintsha kubalandeli balo. Eli xesha libandakanyile ukhetho lwe khangela ilizwi ngendlela elula nekhawulezayo. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngalo mbandela, ungaphambuki kwinqaku elilandelayo.
Ukwenza uphando ngelizwi kuYouTube yenye yezona zinto zisandula ukwenzeka ukuba iYouTube idibene zombini kwisicelo sayo esiphathwayo nakwinguqulelo yedesktop. Ngoku ukuqhuba uphando kweli qonga likhawuleza kakhulu kwaye likhululekile. Awusayi kuphinda ubhale ukuze ufumane umxholo.
Yenza ukukhangela kwelizwi kwiwebhu ye-YouTube
Kutshanje, iqonga leYouTube libandakanye ukubakho kokukhangela ngelizwi ngohlobo lwe desktop yayo. Abasebenzisi balufumene olu hlaziyo lutsha ngokuqinisekileyo, kwaye eyona ilungileyo, ukusebenzisa eli nqaku yenye yezona zinto zilula esinokuzenza ngaphakathi kwiphepha.
Yenza ukukhangela kwelizwi kwiYouTube yenza izinto zibe lula kakhulu xa uzama ukufumana nawuphi na umxholo ngaphakathi kweli qonga. Ukuba uqhuba kwaye ufuna ukukhangela ividiyo, awusayi kuphinda ubhale, ngoku ngokuthetha unokufumana ividiyo oyifunayo.
Ngaba ulapha amanye amanyathelo ekufuneka elandelwe Ukwenza ukhangelo ngelizwi kwinguqulelo yedesktop yeYouTube:
Inyathelo 1: Jonga ukuba unokhetho olunikwe amandla
Into yokuqala ekufuneka uyenzile Jonga ukuba olu khetho sele luvuliwe kwiakhawunti yakho. Ukwenza njalo, kuya kufuneka ungene nge-imeyile kunye negama lokugqitha.
Nje ukuba ngaphakathi kweqonga kuya kufuneka ulungise amehlo akho kwibar yokukhangela ephezulu kwesikrini. Ukuba ujonga icon yemakrofoni Kuthetha ukuba unokhetho olwenziweyo kwaye unokwenza ukukhangela kwelizwi ngaphakathi kweqonga.
Inyathelo 2: Yenza uphando ngelizwi
Emva kokuqinisekisa ukuba isixhobo senziwe sasebenza kwiakhawunti yethu sinakho qhubeka nokwenza ukhangelo ngelizwi kwiYouTube. Ukwenza kulula kakhulu kwaye kuyakhawuleza.
Sinetyala nje Cofa kwi icon yemakrofoni ebonakala kanye ecaleni kwebar yokukhangela. Ukuba eli lixesha lokuqala usebenzisa esi sixhobo, izakuvela kwesikrini semvume yakudala. Apho kuya kufuneka uyamkele imiqathango ukuze uqhubeke.
Ngoku ungaqala sebenzisa isixhobo sokukhangela ngelizwi akukho ngxaki. Cinezela kwimakrofoni kwaye ubonise into ofuna ukuyikhangela ngaphakathi kweqonga.
Kubalulekile thetha ngokuvakalayo nangokucacileyo ukuze i-YouTube yenze uphando ngempumelelo. Ungakhangela nawuphina umxholo owufunayo, nkqu nemirhumo yakho, iividiyo ozithandayo okanye ividiyo ekhethekileyo.
Sebenzisa isixhobo esivela kwiApp
Abasebenzisi banako yenza uphando ngelizwi kwi-app yeselfowuni Ukusuka kwiYouTube. Nantsi indlela onokuyenza ngayo:
cofa ngentla kwemakrofoni (ecaleni kwebar yokukhangela)
Uhlelo lokusebenza umamele, mxelele ke ukuba ufuna ukujonga ntoni eqongeni.
Iziphumo ezahlukeneyo ziya kuvela. Khetha ukhetho oluchanekileyo kwaye silungile.
1 Yenza ukukhangela kwelizwi kwiwebhu ye-YouTube
2 Amanyathelo okulandela
2.1 Inyathelo 1: Jonga ukuba unokhetho olunikwe amandla
2.2 Inyathelo 2: Yenza uphando ngelizwi
3 Sebenzisa isixhobo esivela kwiApp
Ndicima okanye ndicime iakhawunti yam yePinterest?
Ndingaphumelela njani ngePinterest?